Happy Game Apk Download Ho an'ny Android [2022 Mandresy vola] | APKOLL
Mpiloka mahay ve ianao ary te-hanandrana ny vintanao amin'ny filokana amin'ny Internet? Raha eny, dia eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona, izay fantatra amin'ny hoe Happy Game Apk. Izy io no fampiharana Android tsara indrindra, izay manolotra ny lalao filokana telo tsara indrindra, Fish Prawn Crab, Bola Guling, ary Fish Shooting.
Araka ny fantatrao dia ny filokana dia iray amin'ireo zavatra malaza indrindra eto amin'ity sofina ity. Saingy noho ny toe-javatra mahatsiravina dia tsy maintsy mijanona ao anaty trano ny tsirairay, ary sarotra ho an'ny mpiloka ihany koa izany. Noho izany, ho an'ireo olona rehetra te-hampiakatra haingana ny volany dia afaka manandrana ity fampiharana ity izao.
Misy fiasa sy lalao samihafa ao amin'ity fampiharana ity, izay hozarainay amin'ny antsipirihany miaraka aminareo rehetra. Tokony ho fantatrao ny momba ny lalànan'ny fanjakanao alohan'ny hampiasana ity app ity satria mety hiteraka olana aminao izany. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary hizara ny momba an'ity fampiharana ity izahay.
Topimaso momba ny Happy Game Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'i Timor Game. Io no sehatra tsara indrindra, ahafahanao manandrana ny vintanao ary raha miaraka aminao ny vintana dia afaka mahazo vola be ianao. Manolotra lalao telo samihafa amin'ny mpampiasa rehetra izy io, izay afaka miditra amin'ireo mpilalao amin'ny fotoana rehetra.
Ny lalao voalohany amin'ity fampiharana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Fish Prawn Crab. Izy io dia lalao Sinoa Dice misy dice telo sy marika enina isan-karazany amin'ny dice tsirairay. Ny lalao dia tena tsotra. Mila miloka fotsiny ny isan'ny vola madinika amin'ny marika ianao, dia hihodina ny dice.
Happy Game Apk dia hahazo avo roa heny raha dices roa no hampiseho ny filokana filokanao ary raha mampiseho ny mariky ny filokana ny telo, dia hahazo vola intelo heny ianao. Raha te-hilalao amin'ny filokana dia mila mividy vola madinika ianao Manolotra rafitra fividianana namboarina.
Ny faharoa dia Bola Guling ary mitovy amin'ny Fish Prawn. Amin'ity dia mila mametraka ny filokanao amin'ny isa ianao. Manolotra isa 1 ka hatramin'ny 12 izy io, ahafahanao mametraka ny filokanao. Fa amin'ity kosa dia dice roa no hampiasaina rehefa milalao. Afaka mahazo vola tsara ianao raha mandresy.
Mba hilalao ireo lalao ireo dia tsy maintsy misoratra anarana amin'izany ianao ary mamorona kaonty. Afaka mahazo 50php maimaim-poana ianao amin'ny fidirana amin'ny code lucky game happy 222333. Mila manao kaonty fotsiny ianao mba hankafizanao. Milalaova ary mahazo serivisy. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity app ity ianao dia afaka mifandray aminay fa hamaha ny olanao haingana araka izay tratra.
anarana Lalao sambatra
Anaran'ny fonosana happygame.io.android
Developer Lalao Timor
Manolotra ny endri-javatra tsara indrindra ho an'ny mpiloka sasany, ny sasany amin'izy ireo dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay hitanao. Izahay dia hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminareo rehetra eto ambany.
Fivadihana mora ny vola ho vola madinika ary vola ho vola
Serivisy efatra amby roapolo
Raha te-hisintona ny rakitra Apk dia afaka mitsidika ny Google Play Store ianao na mamorona ity pejy ity. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity dia mila mitady ny bokotra fampidinana ianao. Ny bokotra fampidinana dia misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany, mandehana any amin'ny Settings ary sokafy ny tontonana Security, avy eo ampandehanana ny 'Source tsy fantatra'. Aorian'ity fizotrany ity dia afaka mametraka ny rakitra Apk amin'ny fitaovanao ianao.
Happy Game Apk no sehatra tsara indrindra hanandramanao ny vintanao. Noho izany, azonao atao ny manandrana ny vintanao amin'ity rindrambaiko ity ary mahazo vola eo noho eo. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Games, Arcade Tags Lalao sambatra, Lalao Apk, Lalao mahafinaritra Code Code, Milalaova ary mahazo Post Fikarohana
Mangatoon Mod Apk Download Ho an'ny Android [2022 Manga]